RAF ORION PLUS - BaganMart
RAF ORION PLUS
ကွညျ့ရှု့သူ အရအေတှကျ : 155 view counts
အနညျးဆုံး အရအေတှကျ : 10 Liter(s)
Model : ORION PLUS
လုပျငနျးအမညျ : Asian Lube Marketing Co.,Ltd Unverified Member
ဖုနျးနံပါတျ : 09 5139789, +959 455505508 (WhatsApp)
Distribute : ALM Co., LTd
API Classifications : SM, SL, SJ
IOS viscosity Grades : 5W30-5W40-5W50-10W30-10W40-15W40
RAF အင်ဂျင်ဝိုင် SAE 20W50, APT (SLICF) ဖြစ်ပါတယ်။ RAF Oil ကို UAE နိုင်ငံရှိ (RAF Industries- Group of Company) မှ အဆင့်မြင့်ထုတ်လုပ်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ RAF တံဆိပ်အင်ဂျင်ဝိုင်များကို နိုင်ငံတကာ အသိအမှတ်ပြု Certificate များဖြစ်သည့် ISO 9001-14001-18001-2014 အပြင် WQA, Emirate Quality Mark, API လိုင်စင်နံပါတ် 3085 ဖြင့် အထူးအရည်အသွေးမြင့် ထုတ်လုပ်ထားခြင်းကြောင့် အရည်အသွေးမှန်ကန်စိတ်ချရပါသည်။ RAF Oil စက်ဆီချောဆီကို 100% Pure Virgin Oil မှ Adidtive ဖြင့် Blending ပြုလုပ်သားပြီး ALM Co.,Ltd မှ တစ်ဦးတည်း ကိုယ်စားလှယ်တင်သွင်းရောင်းချလျက်ရှိပါသည်။ RAF အင်ဂျင်ဝိုင်မှ အိမ်သုံးကားများအတွက် 5W30, 5W40, 10W30, 10W40 အစရှိသော Motor Oil များကို ထုတ်လုပ်ဖြန့် ချီရောင်းချပေးနေပါသည်။ ရုံးသုံး၊ လုပ်ငန်းသုံး - ကားကြီးကားလေးများအတွက် 15W40, 20W50 Diesel Engine Oil များကိုလည်း 5L, 25L, 200L များကို ဖြန့် ချီရောင်းချလျက်ရှိပါသည်။
Our ALM Company is the distribution company for Lubricant with huge experience in Asian Market. We have3branches in Asia. Myanmar branch is also. The main aim of us is to satisfy for our customer with the best quality. We have 12 years’ experience in Lubricant field. The future plan of us is to cover and provide more solutions and service for our clients and expanding in their service areas. Do feel free to contact us, to cooperate or for wholesales and retail.
RAF4T oil
၀ယျယူလိုသညျ့ အရအေတှကျ Liter(s)
For RAF ORION PLUS
Approximate Quantity Needed Liter(s)
May I get the quotation for "RAF ORION PLUS" ?